मेलम्चीमा बाढीको कहर ! - News Line Nepal
मेलम्चीमा बाढीको कहर !
सिन्धुपाल्चोक / मेलम्ची नदीमा मंगलबार राति आएको बाढी बस्तीमा पस्दा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारको तल्लो क्षेत्र डुवानमा परेको थियो ।
मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका २० जना हराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । शव फेला परेका एक जनाको सनाखत हुन सकेको छैन भने सम्पर्कविहीन भएका २० जनामध्ये ३ जना भारतीय र ३ जना चिनियाँ नागरिक रहेका छन् । सात जना बेपत्ता छन् ।बाढीका कारण हेलम्बुदेखि मेलम्चीभर झन्डै डेढ सय घर डुबानमा परेका छन् । मेलम्ची तटीय क्षेत्रका ८ वटा रिसोर्ट, दुई मोटरेबल पुल र आधा दर्जन झोलुंगे पुल बाढीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार इन्द्रावती किनारमा फेला परेको एउटा शवको पहिचान हुन सकेको छैन । हेलम्बु–२ का ३१ वर्षका माधव भण्डारी, ४२ वर्षका गणेश ज्योति, ३ का ६५ वर्षीया टीकामाया खड्का, ७ का ४५ वर्षका ज्ञानेन्द्र कक्षपति, ६ का ३५ वर्षका चेङा तामाङ र चौतारा साँगाचोकगढी नगरका २३ वर्षका समुद्र नेपाल बेपत्ता छन् । सेनाको हेलिकप्टरले बाढीले डुबेको घरमा अलपत्र परेका चार जनालाई उद्धार गरेको छ ।
‘बाढीका कारण मेलम्ची क्षेत्रका सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरु सबैलाई मेलम्ची नगरको इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको भवनमा राखिएको छ ।